Soo Iibso Suugaanta Jirdhiska & Thermo Body Shaper Dhexda Tababaraha Trimmer Corset - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Suunka Jirdhiska & Thermo Jir-dhise Dheer Tababaraha Trimmer Corset
$ 18.85 qiimaha joogtada ah $ 27.32
Shiinaha / XXL / Buluug Mareykanka / XXL / Buluug Shiinaha / XXL / Liinta Mareykanka / XXL / Liinta Shiinaha / XXL / Casaan Mareykanka / XXL / Casaan Shiinaha / XXL / Madow Mareykanka / XXL / Madow Shiinaha / L / Madow Mareykanka / L / Madow Shiinaha / M / Madow Mareykanka / M / Madow Shiinaha / S / Madow Mareykanka / S / Madow Shiinaha / XL / Madow Mareykanka / XL / Madow Shiinaha / L / Buluug Mareykanka / L / Buluug Shiinaha / M / Buluug Mareykanka / M / Buluug Shiinaha / S / Buluug Mareykanka / S / Buluug Shiinaha / XL / Buluug Mareykanka / XL / Buluug Shiinaha / L / Liinta Mareykanka / L / Liin dhanaan Shiinaha / M / Liinta Mareykanka / M / Oranji Shiinaha / S / Liinta Mareykanka / S / Liin dhanaan Shiinaha / XL / Liinta Mareykanka / XL / Liinta Shiinaha / L / Cas Mareykanka / L / Cas Shiinaha / M / Casaan Mareykanka / M / Casaan Shiinaha / S / Cas Mareykanka / S / Cas Shiinaha / XL / Casaan Mareykanka / XL / Casaan Shiinaha / XXL / Jaale Mareykanka / XXL / Jaale Shiinaha / L / Jaale Mareykanka / L / Jaale Shiinaha / M / Jaale Mareykanka / M / Jaale Shiinaha / S / Jaale Mareykanka / S / Jaalle Shiinaha / XL / Jaale Mareykanka / XL / Jaale
Suunka Jirdhiska & Thermo Jir-dhiseedka Tababaraha Trimmer Corset - Shiinaha / XXL / Buluug gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: Nylon, Polyester, Cotton
Nooca Item: Sawiro
Number Model: Y71663
Nooca Fabric: Satin
Heerka Xakamaynta: Shirkadda
Color: madow / buluug / oranji / casaan / jaalle ah
Lafo: 4 lafaha caagga ah
function: Shaambiska Shaqada, Qulqulka jirka oo yaraanaya Gubashada dufanka leh, Jirka oo sifiican u luma Tababbarka Tareenka, Tababbarka dhexda / jilicsanaanta Dhirta
feature: Jilicsan, Dabacsan, Heat-insulating, Impervious, Airtight
Saameyn: Kadhig sida ugu fudud ee aad u dhisi karto isboortiga.
Design: U qaabee calooshaada & qeex khadkaaga dhexda
Advantage: Miisaan lumis, Tababaraha dhexda, xarkaha jimicsiga, Soo kabashada umusha
Qof kastaa wuxuu ku riyoonayaa inuu yeesho caano aad u badan oo caato ah ama caloosha ku dhegan laakiin fallaadhaha qaybta-dhexe ayaa had iyo jeer ahaan jiray tan ugu adkayd in la tago. Miisaan dhaca iyo xoogaa yar oo injiin ah ayaa ah halganka ragga iyo dumarka labadaba.
Corsets dhexda cincher dhexda waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu qaabeeyo caloosha & qeexaya dhexdaada oo la kordhiyo gooladaha si loo gaaro tirada saacad. Tababbarayaasha dhexda ayaa ku habboon tababarka miisaanka luminta, kooxda jimicsiga, ama xitaa guntimaha taageerada dhalmada.
Xaraashka calooshaani wuxuu bixiyaa xakameyn adag oo 360 ° dhexdaada ah isla markaana wuxuu yareyn doonaa khadadka dheellitirka ee aad isla markiiba rabto. Sidoo kale, waxay qaabayn kartaa jirkaaga qalooca iyo caloosha. Waxa jira lafo caag ah oo ku jirta gudaha sharooyinka, kuwaas oo u qaabeeya taageerida muruqyadaada dhabarka isla markaana kaa caawinaya hagaajinta qaab dhismeedkaaga.
Tababaraha dhexda ayaa laga sameeyay 100% neoprene tayo sare leh oo leh dabacsanaan xoog leh, dahaaran, bakteeriyada bakteeriyada, raaxo leh in la xidho, fududna in la nadiifiyo.
Kuu sii dhididsiinaya oo dardar gelinaya habka qaabeynta muruqyadaada caloosha, weliba, qaabeyaha ayaa si fiican ugu habboon muruqyada caloosha oo noqo kaaliyaha dheelitirka jirkaaga. Waxay faa'iido u leedahay ka-fogaanshaha murqaha murqaha iyo herniation-ka.
Dharka ayaa ka buuxa dabacsanaan, taas oo ka dhigaysa mid raaxo leh oo ku habboon dhexdaada. Suunka khafiifka ah wuxuu taageeraa taageerida wareega oo dhan ee dhexdaada, wuxuu kobciyaa soo kabashada caloosha umusha, dib ayuu u soo celiyaa qallooca jirkaaga, wuxuuna kugu celiyaa xisbiga.
Chart Size: Sida loo xidho ?:
Waan jeclahay tan iyo rarka ugu xawaaraha badan
Waxaan kugula talinayaa inaad dalbato cabir ka badan cabirkaaga shaatiga. Waxaan dalbaday Dhexdhexaad waxaan u badan lahaa inaan dalbado mid ballaaran. Guud ahaan tayada wanaagsan waxay timid toddobaad gudihiis.
Aad ufiican, alaab tayo sare leh, oo aan ur urin gabi ahaanba waxaan amar ku siiyay labo mid yar iyo mid dhexdhexaad ah wayna fiican yihiin dhexdhexaadka waa aniga aniga waxaan ahay 5,9 waxaanan miisaanaa 169 hadii taasi ay gacan ka geysato cabirida in kasta oo aan ku haboonaan karo kan yar hadana aad baan ugu adagnahay jaceylkaaga! laakiin guud ahaan badeecada waa weyn ee loo adeegsaday hal maalin oo shaqeyneysa hadana horeyba looga adkaaday afar rodol.
Cabbirku wuu fiicnaa oo badeecadani waxay run ka ahayd tilmaanta oo waxay u shaqaysaa si dhammaystiran. IG: vampressaloe YT: shadowfay